C/weli Gaas iyo Axmed Xaaf oo heshiis cusub ku kala saxiixday magaalada Cadaado – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
C/weli Gaas iyo Axmed Xaaf oo heshiis cusub ku kala saxiixday magaalada Cadaado
Waxaa magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud heshiis cusub oo dhowr qodob ka kooban ku kala saxiixday madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Galmudug C/weli Maxamed Cali Gaas iyo Axmed Ducaale Geelle Xaaf.
Heshiiskaasi ayaa yimid kadib markii madaxweynaha maamulka Puntland C/weli Maxamed Cali Gaas uu ka qeyb-galay xaflad maalintii shalay lagu caleemo saaray madaxweynaha cusub ee maamulka Galmudug Axmed Xaaf.
Labada madaxweyne ayaa ku heshiiyay in la saameeyo ciidamo isku dhaf ah oo ka shaqeyn doonna ammaanka magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
Heshiiska kadib, waxay labada dhinac si wadajir ah ula hadleen saxaafadda, iyagoona u sheegay inay ka go’an tahay sidii ay xal ugu heli lahaayeen colaadda soo noq-noqatay oo ka taagan magaalada Gaalkacyo.
Ugu dambeyntii, labada dhinac ayaa isla gartay inay ka shaqeyn doonaan deris wanaag iyo sidii ay nabad ugu wada noolaan lahaayeen dadka reer Gaalkacyo
Maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa hore heshiisyo ceynkaan oo kale ugu kala saxiixday Gaalkacyo, Dubai, iyo Muqdisho, iyadoo fullinteeda aanay wax badan ka hirgelin.